शीतलपाटीन्युज डटकम । लण्डन। बेलायतबाट अनलाइन न्युज पोर्टल, डायस्पोरानेपाल डटकमको शुभारम्भ भएको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) का अध्यक्ष कुमार पन्तले वेबसाइट लग इन गरेर संयुक्त रुपमा उद्घ...
शीतलपाटीन्युज डटकम। लण्डन। संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट प्रवासका नेपालीहरुलाई केन्द्रीत गरि डायस्पोरानेपाल डटकम नेपाली अनलाईन पोर्टल आज उदघाटन हुन लागेको समाचार प्राप्त भयको छ। संयुक्त अधिराज्य बेलायतस्थित नेपाली राजदुत लोक दर्शन रेग्मी र गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले संयुक्त...
सरकारले सार्वजनिक गरेको नागरिक एपबाट कागजपत्र बोक्नु पर्ने झंझटबाट मुक्त
शीतलपाटीन्युज डटकम। काठमाडौं। सरकारले सरकारी सेवा प्रबाहका लागि शुक्रबार सार्वजनिक गरको नागरिक मोवाइल मोवाइल एपबाट के-के सेवा लिन सकिन्छ भनेर नागरिक स्तरमा बहस सुरु भएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नागरिक एप सार्वजनिक गरे पछि कसरी...
शीतलपाटीन्युज डटकम। काठमाडौं, १ माघ । हालै नेकपाका केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका पर्यटन व्यवसायी चन्द्र प्रसाद रिजालको सम्मानमा नेकपा समर्थक युबा पर्यटन व्यवसायीले बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम आयोजना गरेको समाचार छ । व्यवसायीहरुले विहिवार होटल यात्रीको हलमा बधाई कार्यक्रम गरेको हो। सो अवसरमा अधिका...
फोनिज युकेमा प्रमिला लाबुङ राई पुन अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित
शीतलपाटीन्युज डटकम। लण्डन। लण्डनमा कार्यरत नेपाली आदिवासी जनजाती पत्रकारहरुको संगठनमा प्रमिला लाबुङ राई पुन अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन्। आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघ (फोनिज) यूकेको भर्चुअल माध्यमबाट शनिबार सम्पन्न अधिवेशनले राईलाई दोस्रो कार्यकालको लागि निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित...
लण्डनबाट निस्कने ग्लोबल नेप्लिज डटकमको अध्यक्षमा चिरन्जीवी ढकाल
शीतलपाटीन्युज डटकम। लन्डन। विश्वभर छरिएर रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुका खबरलाई सम्प्रेषण गर्दै आएको ग्लोबल नेप्लिज डटकम र यससंग सम्बन्धित समूहको अध्यक्षता चिरन्जीवी ढकालले गर्नु हुने भएको छ। ग्लोबल नेप्लिज समूहको निर्देशक र सम्पादन समूहको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। गैर आवासीय नेपाल...
एनआरएनए यूकेको प्रेस तथा मिडिया विभाग बिस्तार
शीतलपाटीन्युज डटकम। लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेको प्रेस तथा मिडिया विभाग बिस्तार भएको छ। विभागका प्रमुख एवम् एनआरएनए यूकेका प्रवक्ता रामकुमार गुरुङले विभागमा संयोजक,सदस्यहरु र सल्लाहकारहरु नियुक्त गरेका छन्। विभाग प्रमुख गुरुङका अनुसार विभागको संयोजकको जिम्मेवारी पत्रकार ध्रुवराज अर्...
अभिनेत्री ऋचा शर्माले गरिन् बिहे
काठमाडौं – अभिनेत्री ऋचा शर्मा वैवाहिक ब न्धनमा बाँधिएकी छिन् । दुई वर्षयता दिपेक्ष विक्रम राणासँग प्रेममा रहेकी उनले शनिबार वि वाह गरेकी हुन् । शनिबार दिउसो मात्रै उनले विवाह बन्धनमा बाँधिएको तस्वीर सार्व जनिक गरेकी हुन् । तस्वीर राख्दै सामाजिक स ञ्जालमा उनले लेखेकी छिन् ‘जिन्दगीको अर्क...
आइतबार यसरी गरिँदै छ सागको भव्य उद्घाटन
दक्षिण एसियाली खेलकुदको कुम्भ मेला साग औपचारिक रूपमा आइतबार सुरु हुँदै छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। साँझ ५ बजे सुरु हुने उद्घाटन समारोह ३ घन्टा ४० मिनेटसम्म चल्ने १३औँ सागका लागि गठित समारोह समितिले जनाएको छ। स्वास्थ्यमा सुधार आए उ...
सागको महिला भलिबलको सेमिफाइनलमा नेपाल र श्रीलंका भिड्दै, पुरुषमा बाहिरियो
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १३ औं संस्करण अन्तर्गत महिला भलिबलमा शुक्रबार सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । शनिबार हुने सेमिफाइनल समूह ‘ए’ को विजेता भारतले समूह ‘बी’ को उपविजेता माल्दिभ्स तथा समूह ‘ए’ उपविजेता नेपालले समूह ‘बी’ को विजेता श्र...
विवादमा फसे सलमान खान
मुम्बई – बलिउड अभिनेता सलमान खानको फिल्म ‘दबंग ३’ रिलिजभन्दा पहिले नै विवादमा फसेको छ । हिन्दू जनजागृति समितिले सेन्ट्रल बोर्ड अफ फिल्म सर्टिफिकेशनलाई फिल्मको सर्टिफिकेट नदिन आग्रह गरेको छ । समितिले फिल्मको शीर्ष गीत ‘हुड हुड दबंग’ मा देखाइएको नृत्यले हिन्दू भावनामाथि ठ...
आज बिहिबार १२ गते,हेर्नुहोस आजको राशिफल
आज २०७६ मंसिर १२ गते विहीबार। ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । सानो प्रयासले नै काम बन्नेछ। स...
यस्तो संकेतले गर्छ भविष्यबाणी ?
शास्त्रमा शुभ र अशुभ संकेतहरुको चर्चा गरिएको छ । विभिन्न संकेतबाट शुभ हुँदैछ कि अशुभ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यस्ता संकेतले भविष्यमा हुने घटनाले तपाईंलाई राम्रो गर्छन् कि नराम्रो भन्ने थाहा दिन्छन् । धन प्राप्तिका केही शास्त्रीय संकेत ? १ यदि तपाईंको दायाँ हातको हत्केला चिलायो भने बुझ्नुस् तपाईंला...
नयाँबानेश्वरमा दु!र्घट-ना १ जनाको गयो ज्या!न,वि!छिप्त अवस्थामा श!ब
काठमाडौँको नयाँबानेश्वरमा सवारी साधनको ठ!क्करबाट एक जनाको नि!धन भएको छ । संघीय संसद भवनको गेट अगाडि (सिभिल अस्पताल नजिक) भएको दु!र्घटनामा अन्दाजी ५०–५५ वर्षका पुरुषको नि!धन भएको बानेश्वर प्र!हरीले जनाएको छ । बिहान सवा ६ बजेतिर भएको दु!र्घटनामा ज्या न गु माउनेको शरीर मात्र फेला परेको ट्रा...
पशुपति नाथले हामि सवैको रक्षा गरुन,पढ्नुहोस आजको राशिफल
मेषः– प्रातःकाल थोरै अनुकुल देखिन्छ । मध्यान्ह पछि समयले कम साथ दिनेछ । मिलेर काम गर्दा डुविनेछ । गलत चिन्तनको शिकार हुने देखिन्छ । दुर्जनहरु पछि लाग्नेछन् । आर्थिक हिनामिना बढि हुनसक्छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी बढाउदा डुब्ने सम्भावना बढि देखिन्छ । परभावको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । इच्छा आकाँक्...
अलपत्र महिला बिर अस्पतालमा
काठमाडौं । सुकेको जीउभरि चुरोटले पोलेको दाग, तातो पानीले डामेको खाटा, संवेदनशील अङ्गमा घाउका डोब देखिन्छन् । कलेजोले काम गर्न छाडिसकेको छ । बेलाबेलामा पेटमा पानी जमेर निकाल्नुपर्ने अवस्था छ । दयनीय अवस्थामा सडकबाट उद्धार गरेकी एक महिला अहिले काठमाडौँको वीर अस्पतालमा उपचाररत छन् । शुरु...
मेषः– काम प्रतिको प्रेम भाव घट्ने छैन तर समयमा गर्ने प्रयत्न गर्नु होला । नयाँ संझौता हुनेछ । थोरै प्रयत्न गर्नु भयो भने नयाँ कार्य योजनाहरु अगाडि बढ्ने छन् । उद्योग धन्दा बन्द व्यापारमा प्रगति हुनेछ । वैदेशिक कार्य सफल हुनेछन् । जीवन साथिबाट सहयोग मिल्नेछ । रजोगुण बढ्नेछ । यात्राको मुहूर्त टर...
आज शनिबार ! हेर्नुहोस तपाईको राशिफल
मेषः– लगनशिल भई काम गर्नु होला । अपरान्ह पूर्वको समय अनुकुल देखिन्छ । गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् भने साँझपख समय प्रतिकुल बन्नेछ । बन्न लागेका काममा अवरोध आउन सक्छ । अनावस्यक विषयलाई लिएर चिन्ता बढ्नेछ । अनावस्यक खर्चमा वृद्धि हुनेछ । सहयोगी मित्र टाढा हुनेछन् । लगानीमा जोड नदिनु होला । ...
यस का/रण राजेश हमालले कहिले चु/रोट पिउदैनन
हिन्दुहरुको सबैभन्दा ठुलो पर्व वडादशैंको दिन अभिनेता राजेश हमालको घरमा एउटा ठुलो घ टना घट्यो । घ टना धेरै बर्षअघिको हो । यो घ टनाले हमाललाई असाध्यै दुः खी बनायो । जुन घ टना उनी कहि ल्यै बिर्स न सक्दैनन् । उक्त दिन अभिनेता हमालले आफुलाई जन्मदिने आमा रेणु केसी हमाललाई गुमाउनुपरेको थियो । श्रीमानको नि...
आज मंगलबार, हनुमानको पूजा-पाठ गरे, हर मनोकांक्षा हुन्छ पूरा
शास्त्रअनुसार कलियुगमा सबैभन्दा चाँडै प्रसन्न हुने देवताका रुपमा हनुमानजीलाई लिइन्छ । मंगलबार हनुमानजीको जन्म भएको र यो दिन हनुमानजीको विशेष पूजा–अर्चना गरे सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्ति हुने विश्वास गरिन्छ । हनुमानजीलाई प्रसन्न पार्न सकेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिको कार्य आफै सम्पन्न हुने भनाइ पनि छ...